प्रशासनको मूर्खतापूर्ण निर्णयले बजारमा झन भीडभाड, कोभिड नियन्त्रणमा प्रत्युत्पादक ! « GDP Nepal
प्रशासनको मूर्खतापूर्ण निर्णयले बजारमा झन भीडभाड, कोभिड नियन्त्रणमा प्रत्युत्पादक !
काठमाडौं । कोभिड­ १९ सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दो रहेको निष्कर्षका साथ काठमाडौँ उपत्यकामा जेठ १४ गतेदेखि लागू हुनेगरी निषेधाज्ञा कडाइ गरिएको छ । दुई दिन किनमेलका लागि समय छुट्याएर शुक्रबारदेखि निषेधाज्ञामा कडाइ गर्ने उपत्यकाका तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णय कोभिड नियन्त्रणका लागि प्रत्युत्पादक बन्ने देखिएको छ ।
जेठ २० गते राति १२ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको छ । थप कडाइका साथ जारी आदेश यही जेठ १४ गते बिहान १ बजेदेखि लागू हुने जनाइएको छ ।
तर, बुधबार बिहानदैखि उपत्यकामा भीडभाड बढेको छ । बेमौसमी झरी बढिरहे पनि दैनिक उपभोग्य पसलमा उपभोक्ताको भीड थामिनसक्नु देखिन्छ । मुख्य चेक र सडकमा स्थिति सामान्य देखिए पनि बसोबास रहेका क्षेत्रमा भने किनमेलका लागि उपभोक्ता सडकमा निस्किएका छन् ।
यसरी सरकारको निर्णयकै कारण कोभिड झन फैलने जोखिम बढेको छ । एक साता उपत्यका ठप्प गरेर कोभिड नियन्त्रणमा लिन्छु भन्ने प्रशासनको रवैयालाई जनस्वास्थ्यविद्ले पनि मूर्खतापूर्ण कदमको संज्ञा दिइरहेका छन् । भीड कम गर्न बरु बजार खुल्ने समय बढाइनुपर्नेमा उल्टै साँघुर्याउँदै लैजाँदा जोखिम बढेको उनीहरुको भनाइ छ ।
यसअघि, काठमाडौँ उपत्यकाका काठमाडौँँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको आजको बैठकले आगामी एक साता निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरेको थियो । यसअघिको यही जेठ १३ गते राति १२ बजेसम्मका लागि आदेश जारी भएको थियो । यसपाली भने किराना पसल पनि बन्द गरिएको छ । वबहानी बेलुकाको घुमघाममा समेत रोक लगाइएको छ ।
काठमाडौंका सीडीओ कालिप्रसाद पराजुलीका अनुसार यसपालि निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक खाद्य सामग्री (तरकारी, फलफूल, दुध, डेरी, मासु, खानेपानी र ग्यास) खरीदबिक्रीका लागि बिहान ९ बजेसम्म खुला रहने भएको छ । यसअघि बिहान १० बजेसम्म खुला गरिएको थियो ।
अहिले थपिएका समयमा भने खाद्यान्न, किराना पसल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर्सलगायत अन्य पसल सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।
औषधी, तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरीदका लागि बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घर बाहिर निस्किन पाउने छैन । अत्यावश्यक काममा निस्किँदा पनि दुई व्यक्तिबीच कम्तिमा दुई मिटरको दुरी कायम गर्नुपर्ने छ । अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग गर्न, पटकपटक साबुन पानीले हात धुन र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्ने छ । सार्वजनिक एबं निजी सवारी साधन पनि सञ्चालन गर्न पाइने छैन । अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानीका सवारी साधन, विरामी तथा कुरुवा (बढीमा २ जना) बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने सवारी साधन मात्रै सञ्चालन हुने छ ।
प्रकाशित : १२ जेष्ठ २०७८, बुधबार